Ukubukela epokothweni kwamadoda: yonke into ekufuneka uyazi | Amadoda aQinisekileyo
IsiJamani sasePortillo | | fashion
Baninzi abantu abacinga njalo iwotshi epokothweni Baye baphuma kwisitayile kwaye abasasetyenziswa. Nangona kunjalo, yinto engazange iqatshelwe eluntwini. Ihlala ixesha elingaphezulu kwefashoni kwaye izisa ubuntu obukhulu kumntu oyinxibileyo. Iiwotshi ezipokothweni zezo xa zivulwa zivusa umdla wabantu abakufutshane.
Kweli nqaku siza kuthetha ngayo yonke imiba ekufuneka uyazi ngeewotshi ezipokothweni kwaye siza kuhlalutya ezinye iimodeli zakho. Ngaba ungathanda ukwazi okungakumbi ngayo?
1 Ifashoni kunye neepokotho
2 Ukuqala kunye nesitayile
3 Yenzelwe bani iwotshi epokothweni?
4 Ngaba iyafikeleleka kuye wonke umntu?
Ifashoni kunye neepokotho
Umbutho uqhele ukukhawulezisa kuyo yonke indawo. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yomsebenzi okanye uxanduva, kodwa ngenxa yeefashoni. Iifashoni ziyatshintsha ngesantya esingenalo ixesha lokuziqhelanisa. Kukho izinto, iimpahla kunye nezinye izixhobo ezenza imfashini okwethutyana kwaye abantu balibale ngazo. Zizo ezo zihlala ziphezulu kwintengiso kwiiveki ezimbalwa kwaye zithathelwa indawo ngokukhawuleza zezintsha eziza ngokukhawuleza kwaye zinamandla.
Oku kuqhubeka kakhulu kuninzi lwezinto. Nangona kunjalo, oku akunjalo ngeewotshi ezipokothweni. Kungenxa yokuba imfashini ekhawulezileyo nekhawulezayo akufuneki ibhidaniswe nengqondo yokuhamba ngesitayile. Kwakhona, kuncinci kakhulu ekufuneka kudidekile kunye yiya fancy okanye ube classy. Iiwotshi ezipokothweni zinika umntu ozinxibileyo ngesitayile esihle, ubuntu kunye nobuhle. Yinto ekwaziyo ukoyisa iifashoni zomzuzu kwaye ubuxoki kufuneka bulingane nabanye.
Xa unewotshi epokothweni, wahlukile kwaye ukhethekile phakathi kwabantu bonke. Akusekho ukwahluka (kuba ukuba unxiba iwotshi kuphela ukuyonwabisa, uya kufana nabanye) kodwa ubonise umxholo wakho. Yinto eyaziwayo ukuba kunzima ngakumbi ukujonga ixesha kumlindo wepokotho kunasesandleni. Nangona kunjalo, xa abantu bengena ezipokothweni bekhupha ii-smartphone zabo kwaye bejonga ixesha, uya kube ubonisana nalo kwiwotshi yakho epokothweni ngesitayile nobuhle obungaphezulu.
Ukuqala kunye nesitayile
Umlindo wokuqala wepokotho yaveliswa nguPeter Henlein ngo-1500. Lo ngumkhandi wezitshixo okhethekileyo kulwakhiwo lwezi ntlobo zeewotshi ukunyusa ukuthengisa kwazo.
Kukho izinto kunye nezixhobo zefashoni ezibonelela ngobunyani bomntu ozinxibileyo. Kodwa iseyinyani elifutshane. Iiwotshi ezipokothweni, nokuba zintsha, ziyakwazi ukugcina umlingo kunye nomtsalane kwewotshi yokuqala eyenziwe.
Kwihlabathi lanamhlanje, apho iteknoloji ixhaphake kuyo yonke indawo, iwotshi epokothweni ixhaphake kakhulu kunokuba ucinga. Kwaye kugcinelwe bonke abo bantu esinokuthi sibaqwalasele "njengabaphuli mthetho." Siyayiqonda njengomntu ofumana izinto ngokulula nangokulula kuba eyithanda loo nto hayi kuba ifashoni njengabanye abaninzi.
Xa umntu ekhokelwa kukhetho lwakhe kwaye hayi ngefashoni, ibalasele phakathi kwabanye ngokuba ngumntu onesitayile esikhulu kunye nentsusa.
Yenzelwe bani iwotshi epokothweni?
Ekuqaleni, abantu abaninzi bayayala xa beyibona ngenxa yokuba luncedo kwayo okanye ubunzima bayo ekunikezeleni ngenkonzo abayinikelayo: kujonga ixesha. Nangona kunjalo, xa iiwotshi ezipokothweni ziwela ezandleni zabanini bazo, kufana nokuba bazikhethile. Imvakalelo yokuba neyodwa imnandi kwaye abantu abaninzi baqala ukuyisebenzisa rhoqo.
Olu hlobo lwewotshi alufanele lwasiwa naphi na. Umzekelo, ayisebenzisi elwandle okanye echibini. Abanye baya kubuza ukuba kutheni. Ewe, impendulo ingaphezulu kokucacileyo: kanye njengokuba singathathi suti okanye iqhina echibini, iwotshi epokothweni inexesha layo nayo.
Ifanelekile kwabo baliqondayo iwotshi njengomatshini wexesha. Ngamanye amagama, iiwotshi ezipokothweni ziyakwazi ukuhambisa ngamanye amaxesha xa zithathwa njengeligugu. Ubuhle bezinto ezikhoyo ngoku ziyaqhubeka nokugcina imigangatho yokunyaniseka kuzo zonke iinkcukacha zayo. Ubume bendawo efanayo, imizobo yamanani kunye neetyathanga zabo ezinde, isiciko esineendlela ezifanayo zangaphambili, njl.
Ngaba iyafikeleleka kuye wonke umntu?
Umbuzo oza ngaphezulu kwesinye xa uqala ukufunda malunga nokuphakama kwewotshi epokothweni. Ewe, kwenzeka kubo njengakwezinye izinto ezininzi. Kuxhomekeka ngokupheleleyo kuhlobo lwewotshi esiyifunayo. Ukuba sithetha ngeewotshi ezipokothwe ziqwalaselwe njenge Into yomqokeleli siza kuya kumaxabiso angenakufikeleleka. Kwenzeka into efanayo nge ukubukela ezemidlalo.
Ngethamsanqa, kukho iinkampani ezineentlobo ngeentlobo zeewotshi ezikumgangatho ophezulu ezingaphezulu kwamaxabiso amkelekileyo. Singafumana uluhlu olukhulu lweewotshi ezipokothweni kwintengiso ngamaxabiso aphantsi. Kwakhona, eziwotshi abawutyesheli nawuphi na umgangatho okanye ubuhle.
Usenokuzibuza ukuba ungayithenga phi iwotshi yakho. Kukho amashishini angenasiphelo kwi-Intanethi nangokwasemzimbeni apho ungawenza khona. Umzekelo, kukho Isikali samaRoma seNani leQuartz ePocket Watch ngeTyathanga ngexabiso elifikelelekayo kakhulu kwaye ungalahli umgangatho. Kulungile ukuqala kulo mhlaba.
Kwelinye icala, sinokufumana iiwotshi ezipokothweni ezikhuthaza uthotho olufana One Piece. Nangona olu hlobo lwewotshi lusasazeke kancinci kwaye kunzima ngakumbi ukuzifumana, sinokuthenga amanqaku Umgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo lokugcina ubungqangi kunye nesitayile lonto inobuntu bethu.
Kukho neendidi ezahlukeneyo zolu hlobo lweewotshi. Ibizwa njalo umongikazi ubukele. Iindidi ngetyathanga elifutshane kunye nokuloba epokothweni yehempe efanayo yabongikazi.
Ngolu lwazi unokufumana iwotshi yeepokotho elungele isitayile sakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Iiwotshi ezipokothweni
Ezona deodorants zibalaseleyo emadodeni